Uqhakamshelwano -Iinkampani zeFoster Swiss Offshore
Cela intlanganiso ngaphandle kwesibophelelo
Inkulumbuso yaseSwitzerland iSocrete Anonyme yenziwa ziingcali zabucala zebhanki zamanye amazwe ezinamava kwiimarike zangaphandle ezivunyiweyo
Umcebisi kuMgangatho weHlabathi kubathengi abalumkileyo
Isibophelelo semfihlo yobungcali eSwitzerland
Se ubhekisele kwimfihlo kunxibelelwano olusekwe phakathi kwegqwetha kunye nabathengi bakhe. Le mfihlo idlulisela kulo lonke ulwazi olufunyanwa ngumcebisi kumthengi.
Umthetho waseSwitzerland ubonelela ngokhuseleko olomeleleyo lokugcina imfihlo, kuba umthetho womgaqo-siseko eSwitzerland ubeka ixabiso eliphezulu kukhuseleko lwabucala. (Umgaqo-siseko weSigqeba weSwitzerland Confederation Epreli 18, 1999 RS 101, inqaku 13).
INkundla ePhakamileyo yaseSwitzerland igwebe imfihlo yobuchwephesha ngenjongo yokuqinisekisa ukuba abathengi beenkonzo zomthetho nezemali banokuzithemba ngokupheleleyo igqwetha laseSwitzerland.
Kananjalo, ukuba umxhasi akalithembi igqwetha lakhe kuya kuba nzima, okanye kungenzeki, ukuba igqwetha limele umxhasi, nokuba kungokucebisa okanye kumgwebo. (NGUGE 112 Ib 606, 606-7).
Amanqanaba aphezulu okhuselo lwabucala
Imfihlo yobungcali ilawulwa kakhulu eSwitzerland
ENgokulandela inqaku lama-321 leKhowudi yePenali yaseSwitzerland, isibophelelo semfihlo yobungcali sidlulisela kuzo zonke iintlobo zolwazi olufunyanwa ligqwetha kumthengi wakhe. Nangona kunjalo, ubumfihlo bobuchwephesha bumiselwe kuphela kulwazi olunikezelweyo ngeenjongo zokubonelela ngeenkonzo zomsebenzi wobugqwetha (BGE 112 Ib 606).
Ngapha koko, ukufihlwa kobuchwephesha kufikelela kuphela kwiinyani umthengi aziphathise igqwetha lakhe ukuze enze umsebenzi wobuchule awunikiweyo ligqwetha (BGE 112 Ib 606 ukuya ku-607).
Igqwetha alinyanzelekanga ngenxa yemfihlo yobuchwephesha ukugcina idatha ibhekisa kwiinyani ezaziwa ngokubanzi (BGE 112 Ib 606 ukuya 607).
URue de Lausanne, oneminyaka engama-37 ubudala.
Inombolo: + 41 225 181 098
Gcwalisa le fomu ilandelayo
kwaye siya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza
Nceda ufake kwaye wenze i "Newslettermsgstr "iplagi ibonisa ifom.